मोरङमा खसीको यो कस्तो चमत्कार ! पुराण सुन्ने देखी मलामी जाने सम्म !! पुरा खबर हेर्नुहोस – पुरा पढ्नुहोस्……
मोरङमा खसीको यो कस्तो चमत्कार ! पुराण सुन्ने देखी मलामी जाने सम्म !! पुरा खबर हेर्नुहोस
तेजन खड्का/उर्लाबारी । खसीले चमात्कारिक ब्यबहार प्रदर्शन गर्न थालेपछि मोरङको शिसवनी –१का बिनोदकुमार महतोेले ५ वर्ष देखि शौखको रुपमा खसी पालिरहेका छन् । खसीले गर्ने क्रियाकलापले जो कोहिलाई आचश्र्यचकित बनाउने गरेको छ । खसीले आश्र्चय चकित बनाएपछि स्थानीयवाशीले बाटोमा हिडँडुल गरेको भेटेमा खानेकुरा दिने र पुजाआजा समेत गर्ने गरेका छन् ।
बाटोमा बडेमानको खसी देखेपछि समाचार बनाउन लागेको समाचारदाता कत्रो ठुलो खसी भनेर समाचार बनाउने सुरमा थियो । तर यथार्थ अर्कै रहेछ । गाउँमा कुनै धार्मिक कार्यक्रमको भक्ति संगीत सुन्नासाथ महतोको खसी कार्यक्रम स्थलतर्फ पुग्ने गर्छ । विराटनगर–रंगेली सडक खण्डको रामचौकमा रहेको महतोको पसलमा खुल्ला छोडिएको खसी ५ किलोमिटर वरपरका सबै धामिर्क अनुष्ठानहरुमा पुग्ने गरेको छिमेकी रामेश्वरदेव मण्डलले बताए । २०६४ सालमा सप्तरीको माहुलीबाट किनेर ल्याएको जमुनापारी जातको खसीले २०६८को चैत १३ देखि १८ सम्म आयोजित यज्ञमा पहलो पटक चमात्कारिक ब्यवहार देखायो ।
सात वर्षको खसी हाल ९३ किलोको छ । छिमेकी गाविस नोचाका शैयद आलमले गत वर्षको रमजानमा खसीलाई १ लाख ५० रुपैयाँ दिएपनि खसी बिक्रि नगरेको महतोको भनाई छ । ठूलो खसी पालेर के गर्छस ? खसीले दाँई गर्दैन,गाडा र हलो तान्दैन भनेर धेरैले बेच्ने सल्लाह दिए । तर,पैसा भन्दा संस्कार र धर्म ठूलो भनेर खसी बेचेको छुइन–महतोले भने । अचेल खसीलाई देख्नसाथ तस्विर खिच्नेको कमि छैन् ।- आवरबिराटनगरबाट |
Prevनेपाली फिल्म उद्याेगमा नयाँ प्रियंकाको इन्ट्री … हेर्नुहोस फोटोफिचर ….
Nextकाठमाडौँमा घर बनाउने वा जग्गा किन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ ? हो भने यो पढ्नुहोस
यस्तो पिडा कसैलाई नपरोस, एकै परिवारको ७ टुहुराको मुटुनै छियाछिया बनाउने कथा-हेर्नुहोस(भिडियो सहित)
सलाम छ ! राहत सामाग्री लिएर बारा पुगे धुर्मुस सुन्तली, बिबरण सहित हेरी सक्दाे सहयाेग गराैं